Natao inona ity "forum" ity?
MEDITIC :: TONGASOA :: Le forum
mahefaserge le Mer 24 Déc - 10:45
Napetraka ity "forum" ity mba ho tamba-tserasera ho an'ny mpianatra ho mpitsabo.
Eto no sehatra anaporofoantsika fa tia mizara isika ary ilaintsika izany mizara izany. Araka izany dia afaka mandray izay azony raisina ihany koa ny tsirairay eto ary afaka mangataka izay tiany hananana.
Ohatra hoe misy "documents" tianao hananana dia afaka manontany mivantana amin'ny fikambanana MEDITIC ianao mba hizaràna azy eto, afaka mangataka amin'ny ankizy namana koa nefa ianao ka hamaly ny antso izay manana.
Marihina nefa fa ny "document" zaraina eto dia natao ho an'ny besinimaro fa tsy misy afenina tsy akory satria fifampizaràna ho an'ny rehetra ny eto, ka izay mahasoa ny sasany mety hahasoa ny hafa ihany koa.
Mazotoa mizara àry e!
» Forum "Ophrys" des Orchidées
» Forum "Des chevaux sans équitation"
» Vidéos du Forum "L'Arbre des Refuges"